Dr.pemyat.win. Spititual Journey Bo... by Murann Ezine 535 views
Right Attitude For Meditation by OH TEIK BIN 2949 views
Library.dailycity.usa.and.lpk.singa... by Zaw Aung 460 views
U tim-mg-tun-pdf by Murann Ezine 621 views
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် by youwitnessjesus 404 views
Rogma international bible course le... by Murann Ezine 706 views
Godly Attitude to Reform Country 2015, A Testimony 1997, Spiritual to be Rich for God Kingdom..
Khai Bil , --
1. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 1/24 ဦးကျော် ၀င်း၏ အောင်မြင်ခြင်းသော့ ချက် သက် သေခံချက် များ ဆရာဦးကျော် ၀င်းသည် ဘုရားဘုန်းတော် ထင်ရှားစေသောမြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်သည် ။ မြန်မာပြည် တွင် ၁၉၉၀နောက် ပိုင်း လူတိုင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာဘဏ် စာရင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ US$ dollar a/c ဖွင့်နိုင်သော ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိကဘဏ် (မေဖလားဝါးဘဏ် ) ဖြစ်သည် ။ ရန်ကုန်တွင် ATM ပထမဆုံးစတင်ခဲ့ပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ဘဏ် ခွဲပေါင်း ၃၀၀ကျော် ဖွင့်နိုင်ခဲ့သည် ။ ရန်ကုန်လေကြောင်းဖြင့် ပထမဆုံး လေယာဉ်ပိုင်သူဖြစ်ခဲ့သည် ။ ၂၀၁၁ နောက် ပိုင်းတွင် တိုင်ဝမ်အစိုးရသစ်အတွက် အချိန်ပြည့် စီးပွားလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်လျှ က် ရှိသည် ။ မြန်မာပြည် အစိုးရသစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင်၊ မြန်မာခရစ်ယာန်လူငယ် များ တတပ်တစ်အား ပါဝင်နိုင်ရေး စံနမူနာယူနိုင်ရန် ပြန်လည် ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည် ။ သူကိုယ် တိုင်ပြောပြချ က် အတိုင်း ဖေါ်ပြပါသည် ။ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း ဘုရားသခင်သည် ကြွယ် ၀သောဘုရားသခင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ဟာ ကောင်းကြီးပေးတဲ့ ဘုရာဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ဟာ ယခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀၊ ဘ၀နဲ့ စပ်ဆိုင်တဲ့ ဂတိတော် ကို ပေးနေသော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ သက် သေခံဝေငှခွင့် ရတဲ့ အတွက် ဘုရားသခင်ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အသက် ရှင်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ကျွ န်တော့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် တဲ့ အခါမှာ ဘုရားသခင် မည် ကဲ့ သို့ ကောင်းကြီးပေး၍ လမ်းပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းများကို သက် သေခံ၊ မဝေငှခင် ဘုရားသခင်ထံ ဆက် ကပ်အပ်နှံ ဆုဆောင်းကြပါစို့...။ ဆုတောင်း အဘ ဘုရားသခင်၊ ကိုယ် တော် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ကိုယ် တော် ၏ ကျေးဇူးတော် မြတ် သည် ကြီးမားလှပါတယ် ။ ကိုယ် တော် ရှင် ဘုရားသခင်သည် ယနေ့၊ မနေ့၊ နောင်ကာလ မပြောင်းလဲတဲ့ ဘုရား၊ ကိုယ် တော် ရှင်ဘုရားသည် ယခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀နှင့် စပ်ဆိုင်တဲ့ ဂတိတော် ကို ပေးတဲ့ ဘုရားသခင် ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွ န်တော် ကိုယ် တော် ၏ ဘုန်းတော် ၊ တန်ခိုးတော် ၊ နာမတော် သည် ဤမြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက် ကိုယ် တော် ရှင်ဘုရားသည် ကျွ န်တော့် ကို ရွေးကောက် အသုံးပြုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် ဘုရား လမ်းပြတော် မူပါ။ ယခု ဖတ် ရှုတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အယောက် တိုင်းအတွက် လည်းမိမိအသက် တာမှာ တည် ဆောက် စရာဖြစ်စေတော် မူပြီး လာမည့် နေ့ရက် အသက် တာမှာ သူ့တပါးကို ပြန်လည် ၍ သက် သေသာဓက ထူနိုင်သည် အထိ ယခု ဖတ် ရှုသော ညီအစ်ကို မောင်နှမ အယေက် တိုင်းကို ကောင်းကြီးပေးသနား ပါမည့် အကြောင်း၊ ကိုယ် တော် ရှင်ဘုရား၏ လက် ၀ယ် သို့ ဆပ်ကပ်အပ်နှံတဲ့ အခါ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဘုရား၏ နာမကို အမှီပြု၍ ဆပ်ကပ်အပ်နှံ ဆုတောင်းပါ၏အဖ... အာမင်...။ အသက် ရှင်သောဘုရား ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ဘဲ၊ တော် တော် များများက အလုပ်များသလားလို့ ကျွ န်တော့် ကိုမေးကြပါတယ် ။ အမှန်တကယ် ပဲ ကျွ န်တော် အလုပ်တကယ် များပါတယ် ။ အချို့က ကျွ န်တော့် ကို လုပ်ငန်း ဒီလောက် တောင်လုပ်နေတာ၊ ဦးနှောက် မခြောက် ဘူးလား..လို့ ပေးကြပါတယ် ။ ကျွ န်တော့် အနေနဲ့ ဦးနှောက် မခြောက် ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျ မ်းစာထဲမှာ ပါတဲ့ အတိုင်းပဲ၊ မိမိအမူအရာကို ထာဝရာဘုရား၌ အပ်နှံရန် ဘုရားသခင် စီစဉ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ ဂတိတော် ကို
2. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 2/24 ကျွ န်တော် ခံယူပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ ကျွ န်တော် နည်းနည်းမှ ဦးနှောက် မခြောက် ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်တော့ များတယ် ။ မနက် ၄နာရီခွဲ ထတယ် ။ ဘုရားသခင်ကို ဆပ်ကပ်တယ် ။ တနေကုန် ဘုရားပေးတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် တဲ့ အခါ မိမိရဲ့ အိတ် ထဲမှာ ပိုက် ဆံဝင်ဖို့ မဟုတ် ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော် ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ တန်ခိုးတော် ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော် သည် ဤမြန်မာနိုင်ငံမှာ ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက် နဲ့ သက် သေပြနိုင်ဖို့ရန် အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟောတာထက် ၊ ပြောတာထက် ၊ ကိုယ် တိုင် သက် သေပြနီုင်ဖို့ရန် အတွက် ဘုရားသခင် ကျွ န်တော့် ကို ကောင်းကြီးပေးတဲ့ အတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ကို အထူးပဲ ချီးမွမ်းပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ပင်ပန်းတယ် ရယ် လို့ မရှိပါဘူး။ မနက် စောစောထတယ် ။ ညမိုးချုပ်တော့ အိပ်ယာဝင်တယ် ။ လူကြီးတွေနဲ့ ခရီးထွက် တယ် ။ ကိုယ် တိုင်ခရီးထွက် တယ် ။ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေကိုလည်းဘတ် စ်ကားစီးသလို၊ ခေါက် တုန့်ခေါက် ပြန်နဲ့ တစ်လမှာ အကြိမ်ကြိမ် သွားလာရပါတယ် ။ သို့သော် လည်းဘုရားသခင် ခွန်အားပေးပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ဟာ တကယ် အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ဟာ ဒီနေ့ ယုံကြည် သူများကို ပေးထားတဲ့ ဂတိတော် ဟာ နှုတ် ကပတ် တရားမှာ ပေးထားတဲ့ အတိုင်း ကျွ န်တော် ခံစားရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း မဝေငှခင် ခွန်အားယူဖို့ ကျ မ်းပိုဒ်လေး နည်းနည်းဖေါ်ပြချင်ပါတယ် ။ ခွန်အားယူရန် ကျ မ်းပိုဒ်များ (၁)သူခိုးသည် ခိုးခြင်း၊ သတ် ခြင်း၊ ဖျ က် ဆီးခြင်းငှ သူခိုးသည် ခိုးခြင်း၊ သတ် ခြင်း၊ ဖျ က် ဆီးခြင်းငှါသာ လာတတ် ၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက် လွတ် ရုံမျှ မက အထူးသဖြင့် အသက် ဖြင့်ပြည့် စုံစေခြင်းငှါ ၁လာသတည်း။ ယော ၁၀း၁၀ (၂) ကိုယ် ကာယကို ဆုံးမခြင်းသည် များစွာသောအကျိုးကို မပေးတတ် ။ ဘုရားဝတ် ၌ မွေ့လျော် ခြင်းမူကား၊ ယခုဘဝ၊ နောင်ဘဝနှင့်စပ်ဆိုင်သောဂတိတော် ကို ရသည် ဖြစ်၍၊ ၉အရာရာ၌အကျိုးကိုပေး တတ် သည် ဟူသော စကားသည် သစ္စာစကားဖြစ်၏။ အကြွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏။ ၁ တိ ၄း ၈­၉ (၃) ငါ၏ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းအာနုဘော် ၌ စံပယ် တော် မူသော စည်းစိမ်ရှိ သည် အတိုင်း၊ သင်တို့အလိုရှိသမျှ တို့ကို ယေရှုရစ်အားဖြင့် ပြည့် စုံစေတော် မူလိမ့်မည် ။ ဖိ ၄း၁၉ (၄) အဘယ် သူမျှ မသိသောသူကဲ့ သို့ဖြစ်သော် လည်းကျော် စောသောသူ၊ အသေခံသောသူကဲ့ သို့ဖြစ်သော် လည်း၊ အသက် ရှင်သောသူ၊ ဆုံးမခြင်းကိုခံသောသူ ကဲ့ သို့ဖြစ်သော် လည်း၊ အသေသတ် ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ် သောသူ၊ ၂ကော ၈း၉ (၅) သူတပါးအားပေးကြလော့ ။ ပေးလျှ င်သူတပါးသည် သင်တို့အားပေးကြလိမ့်မည် ။ အမှန်ခြင်ရုံမျှ မက၊ သိပ်နှက် လျ က် ၊ လှုပ်လျ က် ၊ လျှံလျ က် ရှိခြင်းနှင့် သင်တို့ရင်ခွင်၌ ပေးကြလိမ့်မည် ။ အကြောင်းမူကား၊ အကြင်ချိန်၊ တင်းပမာဏနှင့် သင်တို့သည် သူတပါးအားပေး၏၊ ထိုပမာဏအတိုင်း ကိုယ် ခံရကြမည် ။ လု ၆း၃၈ (၆) ထာ ဝရဘုရားကို ခိုလှုံ၍ ကောင်းသောအကျ င့်ကိုကျ င့်လော့ ၊၊ ပြည် တော် ၌ နေ၍ သစ္စာတရားကိ ကျ က် စားလော့ ၊၊ ၄ထာဝရဘုရား၌ မွေ့လျော် ခြင်း ရှိလော့ ၊၊ သို့ပြုလျှ င် စိတ် နှလုံးအလို ပြည့် စုံရသော အခွင့်ကို ပေးတော် မူမည် ၊၊ ကိုယ် အမှု အရာကို ထာဝရဘုရား၌ အပ်လော့ ၊၊ ကိုယ် တော် ကို ကိုးစားလော့ ၊၊ ဆာ ၃၇း ၃­၅ (၇) လူသည် ဘုရားသခင်၏ ဥစ္စာတော် ကို လုယူရမည် လော့ ။ သို့သော် လည်းသင်တို့သည် ငါဥစ္စာကို လုယူကြပြီ။ အကျွနု ပ်တို့သည် အဘယ် သို့လုယူပါသနည်းဟု သင်တို့မေးလျှ င်၊ ဆယ် ဘို့တဘို့ကို၎င်း၊ ပူဇော် သက္ကာတို့ကို၎င်း လုယူကြပြီ။ သင်တို့သည် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ပြည် သူပြည် သားအပေါင်းတို့သည် ငါ့ ဥစ္စာကို လုယူကြပြီ။ ဆယ် ဘို့တဘို့ရှိသမျှ ကို ဘဏ္ဍာတိုက် ထဲသို့သွင်း၍၊ ငါ့ အိမ်တော် ၌ စားစရာရှိစေခြင်းငှါ၊ ပြုကြလော့ ။ ငါသည် မိုဃ်းကောင်းကင်ပြတင်းပေါက် တို့ကိုဖွင့်၍ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို အကုန်အစင်သွန်းလောင်းမည် ။ မသွန်းလောင်းမည် ကို
3. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 3/24 ထိုသို့စုံစမ်းကြလော့ ဟု ကောင်းကင်ဗိုလ် ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော် မူ၏။ မာလခိ ၃း၃­၁၀ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ကို အထူးဘဲ ချီးမွမ်းပါတယ် ။ အခု ဖေါ်ပြသွားတဲ့ ကျ မ်းပိုဒ်တွေ ကျွ န်တော် အင်မတန် ခွန်အားရပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ရှေးဦးစွာပေါ့ ဗျာ..ဘုရားသခင်ဟာ အသက် ရှင်တော် မူတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဘုရားသခင်ကို မသိခင်က ကျွ န်တော့် အသက် တာ နဲ့ ကျွ န်တော့် မိဘ အသက် တာ အကြောင်းကို တိုတို တုတ် တုတ် နဲ့ သက် သေပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ကြွယ် ၀သော ဘုရားသခင် အခုန ဖေါ်ပြသွာတဲ့ ကျ မ်းပိုဒ်တွေအရ ကျွ န်တော် တို့ ခရစ်တော် ကို ယုံကြည် တဲ့ သူ (ခရစ်ယန်) တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပြန်လည် ပြီးတော့ မိမိကိုယ် ကို သေသေချာချာ ဆန်းဆစ်ကြည့် မယ် ဆိုရင် အင်မတန်ကို ခွန်အားရစရာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ ကျွ န်တော် တို့ ဒီနေ့ ဘယ် နေရာဘဲရောက် ရောက် ခရစ်ယာန်အချို့ဟာ ကုတ် ချောင်းကုတ် ချောင်းနဲ့ ကိုယ့် ကိုယ် ကို မနိုင်မနင်းနဲ့ လေတိုက် ရင်တောင် လဲတော့ မလိုနဲ့ အဲဒီလိုဖြစ်ကြတယ် ။ အမှန်ဆိုရင် ခရစ်တော် နောက် လိုက် ခရစ်တော် ကို ယုံကြည် တဲ့ သူဟာ ဒါမျိုးမဟုတ် ရဘူး။ ခရစ်တော် နောက် လိုက် ခရစ်တော် ကို ယုံကြည် တဲ့ သူဟာ ခရစ်တော် ရှင်ရဲ့ တန်ခိုးတော် အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအရာကို တတ် စွမ်းနိုင်တဲ့ သူဖြစ်ရမယ် ။ ဒီနေ့ ကျွ န်တော် တို့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက ရွာမှာ ရောက် သွားတယ် ။ မြိုမှာ ရောက် သွားတယ် ။ ဆရာရေ..ဒုက္ခရောက် လိုက် တာ.. ကျွ န်တော် က ဘာဖြစ်လို့ ... ဘာလေးပေးပါအုံး ..စသဖြင့် ကျွ န်တော့ ကိုပြောကြတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့မှာ အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရားသခင် ရှိတော် မူပြီး အင်မတန်မှာ ချမ်းသာကြွယ် ၀တဲ့ ဘုရားသခင်ရှိပါရဲ့သားနဲ့ မိမိအသက် တာကို သတ် ချင်တဲ့ စိတ် ၊ မိမိအသက် တာကို ဆုံးရှုံးချင်တဲ့ စိတ် နဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ အသက် ရှင်နေကြတယ် ။ ဘယ် လောက် ၀မ်းနည်းစရာကောင်းသလဲ။ ကျွ န်တော် အထက် မှာ ဖေါ်ပြတဲ့ နှုတ် ကပတ် တော် တရားတွေ အားလုံး ပြန်လည် ခြုံငုံပြီး ကြည့် တဲ့ အခါ .. ဘုရားသခင်ဟာ ကြွယ် ၀တယ် ။ ဘုရားသခင်က ကောင်းကြီးပေးတယ် ။ ဘုရားသခင်ဟာ ယခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀ကို ပေးပိုင်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ သခင်ယေရှု ခရစ်တောဟာ လူ့ဇာတိကို ခံယူပြီးတော့ ဒီလောကိ ရောက် လာတဲ့ အခါမှာ လူတွေရဲ့ အပြစ်တွေအတွက် အသေခံတယ် ။ လူတွေ ဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမျှ အပြစ်ဒုစရိုက် တွေကို ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ အဲဒီအပြစ်ဒုစရိုက် တွေကို ဆေးကြောဖို့ အတွက် လက် ၀ါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံပြီး သူ့အသွေးတော် သွန်းလောင်းသွားတယ် ဆိုတာ ဘယ် လောက် ပြည့် စုံလဲ။ သူ့ရဲ့ ကယ် တင်ခြင်းဟာ အားလုံးပြည့် ပြည့် စုံစုံနဲ့ ဆောင်ရွက် သွားမယ် ။ သို့သော် ငြားလဲ ဒီနေ့ ကျွ န်တော် တို့ ခရစ်ယာန် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အနေနဲ့ ဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို အပြည့် အ၀ မခံစားရဘူး။ တစ်ပိုင်းတစ်စတော့ ခံစားရတယ် ။ ဘာခံစားရသလဲ..ဆိုတော့ .. ငါသေရင်တော့ ငရဲသွားစရာမလိုတော့ ဘူး... ဆိုတဲ့ အဲဒီလောက် ပဲ ခံစားနေရတယ် ။
4. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 4/24 တကယ် တန်းကျ တော့ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ဂတိတော် ဟာ ယခုဘ၀၊ နောင်ဘ၀ နဲ့ ဂတိတော် ၊ ယခုဘ၀မှာ နေရင်လည်းထိုက် သင့်သလောက် ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရပြီး သူများထက် သာကိုသာစေရမယ် ။ သေသွားတဲ့ အခါ နောင်ဘ၀မှာလည်းငရဲသို့ သွားစရာမလိုပဲ ခရစ်တော် နဲ့အတူ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ စိုးစံရမယ် ။ ဒီ ဂတိတော် နှစ်ခုစလုံး ပေးထားပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ရဲ့ အသက် တာနဲ့ ကျွ န်တော် မိဘတွေရဲ့ အသက် တာမှာလည်းအဲဒီလို အသက် ရှင်တော် မူတဲ့ ဘုရားကို မရခင်အချိန်ကလေးမှာ အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပမ်းစွာ အသက် ရှင်နေခဲ့ရတယ် ဆိုတာ ကျွ န်တော် သိခဲ့ရပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ဟာ ရှမ်းပြည် မြောက် ပိုင်း ကွတ် ခိုင်၊ ကွတ် ခိုင်ကသွားရင် တာမိုညှဲ၊ တာမိုးညှဲကသွားရင် ..၀ါးတောရွာကို ရောက် မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် အဲဒီ ၀ါတောရွက မုန်းဝင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။ မုန်းဝင်း တိုင်းရင်းသားဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားထဲက အုတ် စုတစ်မျိုး လူနည်းစုဖြစ်ပါတယ် ။ ငယ် စဉ်ဘ၀ ကျွ န်တော် ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် နောက် ပိုင်း လွတ် လပ်ရေးရပြီးမှ မွေးတယ် ဆိုတော့ ကျွ န်တော့ မိဘတွေရဲ ပြောပြချက် အရ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီ ကျွ န်တော့ မိဘတွေဟာ စစ်ကိုရှောင်ပြီးတော့ တောကြိုတောင်ကြားတွေမှာ လိုက် နေရပါတယ် ။ တောကြိုတောင်ကြားမှာ ငါးကိုတွေ့တဲ့ အခါ၊ ကျွ န်တော် အတော် လေး သတ် ရတယ် ။ ကျွ န်တော် မွေးခဲ့တဲ့ ရွာဟာ ၀ါးတော လို့ခေါ်တယ် ။ အဲဒီရွာဟာ ငါးတွေ အင်မတန်များပြားပြီး လူနေအိမ်ခြေ ခြောက် အိမ်လောက် ပဲ ရှိပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ရဲ့ မိဘတွေဟာ လယ် လုပ်စားပါတယ် ။ ကျွ န်တော့ မှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ရှစ်ယောက် ရှိပါတယ် ။ ကျွ န်တော် က နံပါတ် (၃)ပါ။ ကျွ န်တော် တို့ ငယ် စဉ်က ကျွ န်တော် တို့ မိသားစုဟာ အင်မတန် ဆင်းရဲပါတယ် ။ အဲဒါနဲ့ တစ်နေ့မှာ ဖခင်ကြီးက .. ငါတို့ ဒီအတိုင်းနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူး၊ ငါတို့မိသားစု ဘ၀တိုးတက် အောင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြို့မှာသွားပြီးတော့ အလုပ်ရှာရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး ကွတ် ခိုင်မြို့ကို ရောက် လာပါတယ် ။ ကွတ် ခိုင်မြို့ကို ရောက် လာတဲ့ အခါ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလ နောက် ပိုင်း ဆိုတော့ လည်းအလုပ်ရှာမရ ဖြစ်နေပါတယ် ။ အဲဒီလို အလုပ်ရှာရင်း ယောင်လည် လည် နဲ့ သွားလာနေတဲ့ အခါ ဖခင်ယုံကြည် သူဖြစ်လာခြင်း
5. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 5/24 တစ်နေ့တော့ အသက် ကြီးပြီး ခေါင်းဖြူနေတဲ့ ဆရာကြီးတစ်ပါးဟာ အကော် ဒီယံတီးပြီး ယေရှုအကြောင်းကို သီချင်းဆိုပြီး သက် သေခံ ဟောပြောနေပါတယ် ။ လူတွေ ရောက် လာပြီး နားထောင်ကြတယ် ။ အဲဒီဆရာကြီးက အဲဒီအချိန်တုံးက ဘာဟောသလဲဆိုတော့ ... ငါတို့ဘုရားသခင်ဟာ မိမိနေထိုင်တော် မူသော ဘုန်းစည်းစိမ်ရှိတော် မူတဲ့ အကြောင်း၊ ယေရှုခရစ်တော် အားဖြင့် သင်တို့အလိုရှိသမျှ ကို ပြည့် စုံတော် မူလိမ့်မယ် ..ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ ယေရှုခရစ်တော် ဤလောကသို့ လူဇာတိကို ခံယူပြီး ကြွလာတဲ့ အကြောင်း၊ လူလောက လူသားတွေရဲ့ အပြစ်တွေအတွက် အသေခံခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ ...ဟောပြောသက် သေခံနေတယ် ။ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက် နေတဲ့ သူဟာ အဲဒီဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် လက် ခံပြီးတဲ့ အခါ ဘုရားသခင်ကို ခေါ်ရင်၊ ဘုရားသခင်က ထူးမယ် .. ဆိုတဲ့ အကြောင်း.. ဟောပြောသက် သေခံနေတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ကျွ န်တော့ ဖခင်ကလည်းအဲဒါကိုကြားတဲ့ အခါ လူအများရှေ့မှာသွားပြီးတော့ ခရစ်တော် ကို ယုံကြည် လက် ခံမယ် ..လို့ ၀န်ခံတယ် ။ အဲဒီလို ၀န်ခံတဲ့ အခါ ဆရာကြီးက သူ့အသက် တာကို ဘုရားသခင်ထံ ဆက် ကပ်ဆုတောင်းပေးတယ် ။ ဆရာကြီး ဆက် ကပ်ဆုတောင်း မပေးခင်.. ဆရာကြီးက ခင်ဗျား၊ ဘာတွေ ဆုတောင်းပေးစေလိုသလဲ...လို့ မေးတော့ ၊ ကျွ န်တော့ ဖခင်ဟာ .. သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ခံတယ် ။ ပြီးတော့ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ကို ကယ် တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ ကျွ န်တော် ခေါ်ဖိတ် လက် ခံချင်ပါတယ် ။ ဒုတိယ အချက် အနေနဲ့ ကျွ န်တော့ မှာ အင်မတန်ဆင်းရဲပြီး တစ်ရက် လုပ်စာ၊ တစ်ရက် မစားလောက် ပါဘူး။ ဒီမြို့ကို ရောက် လာတဲ့ အခါ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း အနေနဲ့ တစ်ခုခုလောက် လိုချင်ပါတယ် ။ ဘုရားသခင်ဆီက မျှော် ပါတယ် ...လို့ .. ကျွ န်တော့ ဖခင်က ပြောတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ဆရာကြီးကျွ န်တော့ ဖခင် ပြောတဲ့ အတိုင်း ဆက် ကပ်ဆုတောင်းပေးတယ် ။ တောင်းလျှ င်ရမည် ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် ကြောင့် အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ရဲ့ ဂတိတော် ကို ဘယ် တော့ မှ မဖျ က် ဘူး။ တောင်းပါ ..တောင်းရင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အတိုင်း တောင်းတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ကျွ န်တော့ ဖခင်ဟာ ဆက် လက် ပြီး အဲဒီမြို့မှာ လိုက် လံ အလုပ်ရှာတဲ့ အခါ ယက္ကန်းလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနဲ့ သွားတွေ့တယ် ။ တွေ့တဲ့ အခါ လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းကောင်းပါပြီ၊ ဒါဆိုရင် ကျွ န်တော် လက် ခံပါမယ် ။ ခင်ဗျားဝင်လုပ်ပါ ..ဆိုတော့ ကျွ န်တော့ ဖခင် ၀င်လုပ်ပါတယ် ။ ၀င်လုပ်ရင်းနဲ့ ကျွ န်တော့ ဖခင်ဟာ နှုတ် ကပတ် တော် တရား (ကျ မ်းစာ) သူ့ကို သွန်သင်တဲ့ အတိုင်း သေးငယ် တဲ့ အမူအရာမှာ သစ္စာရှိရမယ် ။ လုပ်ငန်းရှင်ဟာ ကိုယ့် ရဲ့ သခင်လိုပဲ သဘောထားရမယ် ..ဆိုတော့ ကျွ န်တော့ ဖခင်လည်းရိုးသားဖြောင့်မတ် စွာနဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ် ။ အဲဒီနှစ်ထဲမှာပဲ အဲဒီလုပ်ငန်းရှင်က လုပ်ရင်း၊လုပ်ရင်းနဲ့ စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့ အခါ သူက ကျွ န်တော့ ဖခင်ကို ခင်ဗျားဖက် လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီစက် ရုံကြီးကို ခင်ဗျားကို ကျွ န်တော် အကြွေးနဲ့ပေးမှာပဲ။ ခင်ဗျားလုပ်ပါ။ ခင်ဗျားလုပ်ပြီး တဖြေဖြေးနဲ့ ကျွ န်တော့် ကို ဆပ်ပါ။ အဲဒီအခါ ကျွ န်တော့် ဖခင်ကလည်းဘုရားသခင် တစ်ခုခု ပြင်ဆင်ပေးမှာပဲ။ ဒူးထောက် ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းတယ် ။ ဒီအကြံအစည် ဟာ ကိုယ် တော် ရဲ့ အကြံအစည် လား.. ဘယ် လိုလဲ..ဆိုတာ ကျွ န်တော် နားမလည် ပါဘူး။ လုပ်ငန်းလုပ်နေရင်းနဲ့ ကောင်းလာပြီဆိုမှ လုပ်ငန်းက စီးပွားရေးကျ လို့ သူက ဒီစက် ရုံကြီးကို အကြွေးနဲ့ရောင်းနေတယ် ။ ကျွ န်တော် လက် ခံရမလား...လို့..ဘုရားသခင်ကထံ ဆုတောင်းတယ် ။ ဘုရားသခင်ကလည်းလက် ခံလိုက် ပါ...လို့ တည့် တည့် လင်းလင်းပဲ ကျွ န်တော့ ဖခင်ကို ဖေါ်ပြပါတယ် ။ ကျွ န်တော့ ဖခင်က အဲဒီစက် ရုံကို လက် ခံပြီးတဲ့ နောက် ပိုင်း တစ်လ၊ နှစ်လကြာတဲ့ အခါ ပိတ် စတွေ အရမ်းရောင်းကောင်းတပဲ။ ထုတ် လို့တောင် မလောက် နိုင်တော့ ဘူး။ အဲဒီစက် ရုံတန်ဖိုးကို သုံနှစ်လောက် ပေးချေရမဲ့အစား သူဟာ တစ်နှစ်ထဲနဲ့ ပေးချေနိုင်ခဲ့တယ် ။ ကျွ န်တော့် ဖခင်ဟာ ယေရှုခရစ်တော် ကို ယုံကြည် လက် ခံပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး အကြွင်းမဲ့ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် ခဲ့တယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းအမြဲတမ်း ဘုရားသခင်အကြောင်းကို သွန်သင်ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ဟာ ငယ် ငယ် တုံးက အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ အတွက် ကျောင်းကောင်းကောင်း မနေရပါဘူး။ ကျောင်းတက် တဲ့ အခါ ဖိနပ်မပါဘူး။ ကျောက် သင်ပုန်ိးကု ကျောက် တံနဲ့ စာရေးတဲ့ အခါ သူငယ် ချင်းတွေရေးပြီး၊ ပြစ်ချထားတဲ့ ကျောက် တံ အတိုအထွာလေးကို ကောက် ပြီး ရေးပါတယ် ။ အဲဒီကြားထဲမှ ဖခင်ကလည်းဘုရားသခင်ကို အားကိုးပြီး လုပ်ငန်းတွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေရင်း
6. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 6/24 ကျွ န်တော် တို့ မောင်နှမတွေကို ဘုရားသခင်အကြောင်း အမြဲသွန်သင်ပါတယ် ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော် အကြောင်း ပြောတဲ့ အခါ ကျွ န်တော် က အမြဲတမ်းဆန့်ကျ င်တယ် ။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွ န်တော် ဟာ ကျောင်းပြီးလို့ စီးပွားရေးလောကထဲ ၀င်လာပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်ထိ ဘုရားဆိုတာ ကျွ န်တော့ မှာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ယုံလည်းမယုံကြည် ခဲ့ပါဘူး။ ငါလုပ်ရင် ငါဖြစ်မှာပဲ ..ဆိုတဲ့ ခံယူချက် နဲ့ ကိုယ့် အားကိုယ် ကိုးပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီလို လုပ်ကိုင်တဲ့ အခါ ..မအောင်မြင်ဘူးလား...ဆိုတော့ .. အောင်မြင်တယ် ။ ပိုက် ဆံရတယ် ။ စာတန်မာန်နတ် ..အဲဒီအချိန်တုံးက ကျွ န်တော့် ကို ကျိကျိတက် ချမ်းသာရတဲ့ အခွင့်အရေး၊ ပိုက် ဆံပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့.. တစ်နေ့တော့ အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ် ။ အဲဒီလို အချိန် ကြုံတွေ့လာရတဲ့ အချိန်ကျ တော့ ကျွ န်တော့ စိတ် ထဲမှာ ဘာကိုသတိရသလဲ...ဆိုတော့ ရွှေငွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ဘယ် လောက် ပဲ ချမ်းသာချမ်းသာ၊ ဘုရားသခင်မပါတဲ့ အခါ ..ဘယ် လောက် ပဲရှိရှိ ..ခဏလေးနဲ့ ပြုတ် ထွက် သွားပါလား...ဆိုတာ နားလည် လာတယ် ။ အဲဒီအခါကျ မှ ဘုရားသခင်ကို ဒူးထောက် ပြီး ဆက် ကပ်ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ကိုယ် တော် ... ကိုယ် တော် ဟာ အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် ..လို့ ကျွ န်တော် ရဲ့ ဖခင်၊ မိခင်တွေ ကျွ န်တော် ငယ် ငယ် တုန်းက ကျွ န်တော့် ကို သွန်သင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွ န်တော် မလုပ်ခဲံပါဘူး...။ ဘုရားသခင်ကို စိန်ခေါ်ပါ ကျွ န်တော် ကိုယ် တော် ကို တစ်ခုပဲ မေးချင်တယ် ။ ယခု ကျွ န်တော် ကြုံနေရတဲ့ အခက် အခဲကို တစ်လအတောအတွင်း ကျွ န်တော့ ကို အဖြေပေးမယ် ဆိုရင်၊ ကိုယ် တော် ဟာ အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွ န်တော် လက် ခံပါမယ် ။ ကျွ န်တော် ကိုယ် တိုင်လည်းလိုက် လံပြီးတော့ ကိုယ် တော့် အကြောင်းများကို ဝေငှမယ် ။ ဟောကြားမယ် ။ သက် သေခံပါမယ် ။ ရောက် တဲ့ နေရာမှာ ကျွ န်တော် ပါဝင်ပါမယ် ..လို့ ဆက် ကပ်ဆုတောင်းပါတယ် ။ (၁၇)ရက် အတောအတွင်းမှာပဲ ဘုရားသခင်ဟာ အတိအလင်း ကျွ န်တော့ ကို အဖြေပေးပြီး အဲဒီအခက် အခဲ ပြသနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အထဲမှ ကယ် နှုတ် ခဲ့ပါတယ် ။ သာသနာစတင်ဆောင်ရွက် အဲဒီအချိန်ကစပြီး သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဟာ တကယ့် အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွ န်တော် တောင်းတဲ့ အခါ ကျွ န်တော့ ကို ကူညီခဲ့တယ် ။ မစတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျွ န်တော် လိုက် ပြီး နေရာတကာမှာ ဟောကြားခဲ့တယ် ။ သက် သေခံတယ် ။ ဝေငှတယ် ။ ကျွ န်တော် ဟာ ရှိရှိသမျှ အားလုံးကို စွန့်လွှတ် ပြီး သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဟာ အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း (၁၀)နှစ်ကျော် လောက် တောကြို၊ တောင်ကြား ဖြတ် ကျော် ပြီး ဟောကြားခဲတယ် ။ သက် သေခံတယ် ။ ဝေငှခဲပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဟာ အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း၊ကို
7. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 7/24 လူတကာ..ကျွ န်တော် ကဲ့ သို့ ခံစားရအောင်လို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီလို ကျွ န်တော် လိုက် ပြီး ဝေငှတဲ့ အခါမှာ ကျွ န်တော့ မှာရှိတဲ့ အိမ်ကိုရောင်းချလိုက် တယ် ။ ကျွ န်တော့ မှာရှိတဲ့ ကား (နောက် ဆုံးတော့ မောင်းရင်း၊မောင်းရင်းနဲ့ တာယာကတုံးတွေဖြစ်သွားတယ် ၊ မောင်းလို့မရတော့ ဘူ။။ အခြေလည်းပျ က် သွားပါတယ် ။ နောက် ဆုံး အိမ်မှာရှိတဲ့ ရေခဲသေတ္တာနဲ့ ဆိုဖာတွေကို ကျွ န်တော် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထုတ် ရောင်းတော့ ၊ ကျွ န်တော့ သမီး ဘာပြောလဲဆိုတော့ ... "အဖေ.. လူများယူသွားကုန်ပြီ၊ အိမ်မှာ ဘာမှ မရှိတော့ ဘူး..." တဲ့ ။ ကျွ န်တော် က ယူပစေလို့။ ဘုရားရှင် ကျွ န်တော် တို့ကို ပေးထားခဲ့တယ် ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှုတော် မြတ် မှာ ပြန်လည် ပါဝင်တယ် ။ ရှိရှိသမျှ တစ်ခုမှ မကျ န်တော့ ဘူး။ ကားပါ ရောင်းချခဲ့တယ် ။ အားလုံးရောင်းချပြီးတော့ မှ ကျောပိုးအိတ် တစ်လုံးထမ်းပြီး တစ်မြို့ဝင်၊ တစ်မြို့ထွက် နဲ့ တောရွာတွေပါမကျ န်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော် အကြောင်းကို ကျွ န်တော် လိုက် လံပြီး ဟောကြားခဲ့တယ် ။ ဝေငှတယ် ။ အဲဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ကျ မ်းစာတွေကို သင်ယူခဲ့ပါတယ် ။ ကျ မ်းစာတစ်အုပ်လုံးကို အစအဆုံး (၇)ကြိမ်လောက် ကျွ န်တော် ဖတ် ပြီး ကျွ န်တော် လေ့ လာတဲ့ အခါ ကျွ န်တော် အဖြေမှန်ကို တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ ယခင့် ယခင်တုံးက ကျွ န်တော် နားမလည် ခဲ့တဲ့အချက် အလက် တွေကို ကျ မ်းစာထဲမှာ အားလံးအဖြေတွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီလို ဟောကြားရင်းနဲ့ပဲ ကျွ န်တော် ဟာ ဘာဖြစ်လာသလဲ...ဆိုတော့ ၊ ကျွ န်တော် ဟာ ခြေထောက် ၂ချောင်းထဲနဲ့ လမ်းလျှောက် ပြီး ဟောကြားမယ် ဆိုရင် လူဦးရေသန်းပေါင်း ငါးဆယ် (၁၉၈၅) လောက် ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ် လိုလုပ်ပြီး ဧ၀ံဂေလိ တရားရောက် နိုင်မှာလဲ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွ န်တော် စဉ်းစားတယ် ။ ဘုရားသခင်ကျွ န်တော့ ကို ပိုက် ဆံပေးပါ ကိုယ် တော် ..ကျွ န်တော့် ကို ပိုက် ဆံပေးပါ။ ကျွ န်တော် ကို ပိုက် ဆံပေးရင်၊ ကျွ န်တော် မှာရှိတဲ့ ငွေနဲ့ ကျွ န်တော် တစ်ယောက် တည်းအစား ဘုရားသခင်အမှုတော် အတွက လူပေါင်း ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို ကျွ န်တော် ကူညီနိုင်မယ် ။ အဲဒါကြောင့် ကျွ န်တော့ မိန်းမကိုလည်းပြောပြတယ် ။ ဒို့..ဒူးထောက် ဆက် ကပ်ရအောင်၊ အချိန်တန်ပြီလို့ ..စပြီး ဒူးထောက် ပြီး ဘုရားသခင်ကို ဆက် ကပ်ဆုတောင်းတယ် ။ ဘာကြောင့် ဧ၀ံဂေလိတရားကို ဟောပြောရသလဲဆိုတော့ သမ္မာကျ မ်းက ကျွ န်တော် ဖတ် တဲ့ အခါ ယေရှုခရစ်တော် ဘုရား ဒီလောကကို ကြွရောက် လာပြီး ခင်ဗျားတို့ ကျွ န်တော် တို့အတွက် အသေခံပြီး၊ ရှင်ပြန်ထမြောက် တဲ့ အခါမှာ သူမိန့်မှာတာ ၂ခုပဲရှိတယ် ။ (၁) သင်တို့အချင်းချင်း ချစ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်ယာန် ညီအအစ်ကိုမောင်နှမများ အချင်းချင်းမချစ်ကြဘူး၊ မချစ်နိုင်ဘူး။ အိမ်နီးနားချင်းတောင် အတိုက် အခိုက် တွေ ဖြစ်ကြတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ကွှန်တော် တို့မှာ အကြီးပွားကြဘူး။ (၂) ခရစ်တော် ဘုရား ထပ်မှာတဲ့ တစ်ချက် ကတော့ သင်တို့သည် ဝေနေယျ သတ္တ၀ါ အပေါင်းကို ငါ၏ ဧ၀ံဂေလိတရားကို ဟောကြားပါ..လို့ မှာထားတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ မပါဝင်ချင်ကြဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွ န်တော် တို့ဟာ ရှင်ပေါလုပြောသလိုပဲ ငါသည် ဧ၀ံဂေလိတရားကို မဟောရင် အမင်္ဂလာဖြစ်တယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ဟာ ဟာ အဲဒီ နှုတ် ကပတ် တော် တရားကို သိတဲ့ အခါ သင်တို့သည် ဝေနေယျ သတ္တ၀ါ အပေါင်းကို ငါ၏ ဧ၀ံဂေလိတရားကို ဟောကြားပါ..ဆိုတဲ့ အတိုင်း၊ ဟောတယ် ၊ ပါဝင်တယ် ။ ကိုယ် တိုင်ဟောနိုင်ရင် ဟောတယ် ။ ကိုယ် တိုင်မဟောနိုင်တဲ့ အခါ ငွေကြေးအားဖြင့်ပါဝင်တယ် ။ ဒီနေ့အနေနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားနဲ့ ပတ် သက် လာရင် ကျွ န်တော် ရန်သူကို အင်မတန်ချစ်တယ် ။ ကွှန်တော့် ကို နှိပ်စက် တဲ့ သူတွေ၊ ကျွ န်တော့ ကို တိုက် ခိုက် တဲ့ သူတွေအတွက် ကျွ န်တော် အမြဲတမ်း ဆုတောင်းပေးပြီး သူတို့နဲ့ မိတ် သဟာရဖွဲ့တယ် ။။ ဒါကြောင့်လည်းဘုရားသခင်က ဒီကနေ့အထိ ကျွ န်တော့် ကို ကောင်းကြီးပေးပါတယ် ။
8. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 8/24 View Rev. U Kyaw Win Sermon in Youtube (search word, Rev U Kyaw Win) တံမြက် စီးမှာဘရိတ် ရှုး တစ်နေ့ကျ တော့ ရွာကိုရောက် သွားတယ် ။ ရွာသူရွာသားများဟာ စီးပွားရေးတွေလုပ်ကြတာ ထိုင်းနဲ့ဒီဘက် ကုန်စည် ကူးသန်း စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ အခါ တံမြက် စီပင်ကို မြက် လိုစည်းပြိးတော့ ရောင်းကြတယ် ။ အဲဒါကို ကျွ န်တော် တွေ့လိုက် တဲ့ အခါ ဒီမြက် ဟာ တံမြက် စီးလုပ်ကြတယ် ။ တောထဲမှာ သွားခုတ် ပြီး လာရောင်းကြတယ် ။ နိုင်ငံခြားမှာ တံမြက် စီးလုပ်ကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမြက် ဟာ တံမြက် စီး တစ်ခုတည်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး...လို့ ကျွ န်တော် စဉ်းစားမိတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ထံ ကျွ န်တော် ဆုတောင်းတယ် ။ ကိုယ် တော် ... တံမြက် စီး ထက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာဖြစ်အောင် ကိုယ် တော့် အနေနဲ့ ဖန်ဆင်းထားတာဘဲ၊ ကိုယ် တော် လမ်းဖွင့်ပေးသနားတော် မူပါ၊ ဒါနဲ့ ကျွ န်တော် မည်းဒီမှာရောင်းချတဲ့ တံမြက် စီးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကုန်သည် ကြီးတစ်ယောက် နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ...ကဲ..ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ၊ နိုင်ငံခြားကို ပို့ကြည့် ပါဦး၊ တံမြက် စီး တစ်ခုတည်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..ဆိုတော့ သူက ဂျ ပန်ကိုပို့လိုက် တယ် ။ ဂျ ပန်က သုတေသန စမ်းသပ်လိုက် တဲ့ အခါ မော် တော် ကားမှာ သုံးတဲ့ ဘရိတ် ရှုးရဲ့ အဓိက ကုန်ကြမ်းဖြစ်နေတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ဟိုဖက် ကလူတွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီး ကျွ န်တော် နိုင်ငံခြားကို အကြီးအကျ ယ် တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ် ။ အမှန်တကယ် ပြောရမယ် ဆိုရင် ဘုရားသခင်လမ်းဖွင့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါတွေက ကျွ န်တော် တို့ မျ က် စိရှေ့မှာ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ တကယ့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာပဲ။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ကြွယ် ၀စေတဲ့ လောကကြီးမှာနေစဉ် ကျွ န်တော် တို့က ဖေါ်ထုတ် ဖို့ပဲ၊ မြန်မာစကားပုံရှိပါတယ် ။ ....မသိသူကျော် သွား၊ သိသူဖေါ်စား.. ။ ဒီကနေ့ ကျွ န်တော် တို့ ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေလည်းစီးပွားရေးဘယ် လိုလုပ်ရမယ် ။ စက် ရုံဘယ် လိုလုပ်ရမလဲ။ မွေးမြူရေးဘယ် လိုလုပ်ရမလဲ..ဆိုတာကို အဲဒီ နှုတ် ကပတ် တော် သမ္မာကျ မ်းစာထဲမှာ ပါတဲ့ အတိုင်း ကျွ န်တော် တို့ လိုက် နာပြီး ဆောင်ရွက် သွားမယ် ဆိုရင်တော့ သမ္မာကျ မ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ ဂတိအတိုင်း ကျွ န်တော် တို့ ကောင်းကြီးအမှန်တကယ် ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ အရာ ရွှေ၊ငွေ ချမ်းသာနိုင်ပါတယ် ။ မြေကြီးအောက် ကအတုံးလေး တံမြက် စီးရာသီပြီးလို့ နောက် ရာသီကျ တော့ လည်းဘုရားသခင်ဟာ အကောင်းဆုံး စီစဉ်ပေးပါတယ် ။ ကျွ န်တော် တိုပ မိသားစုဟာ ဘုရားသခင်ကို ဆက် လက် ဆက် ကပ်၊ ဆုတောင်းတယ် ။ ကိုယ် တော် ... ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ကိုယ် တော် ဟာ
9. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 9/24 ကြွယ် ၀တဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ် တော် အနေနဲ့ စံပါယ် တော် မူသော ဘုန်းစည်းစိမ်နဲ့တကွ ယေရှုခရစ်တော် ကိုပင် ကျွ န်တော် တို့ကို ပေးပြီးပြီပဲ။ ခရစ်တော် ကို ရရင် ကျ န်တဲ့ အရာအားလုံးကိုလည်းရမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ် တော် ..ဆက် ပေးပါ။ ကျွ န်တော် ဒီမှာ အများကြီးလိုပါတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ ဇနီးမောင်နှံ (၂)ယောက် စလုံး ကလေးတွေခေါ်ပြီး ဆုတောင်းတယ် ။ အဲဒါနဲ့ တစ်နေ့ကြတော့ ဘုရားသခင်ဟာ အံ့ သြစရာဘယ် လောက် ကောင်းသလဲ ဆိုတော့ ရွာကလူငယ် လေးတစ်ယောက် ကျွ န်တော့် ဆီ ရောက် လာပြီး.. ဆရာရေ..ဒီအတုံးကလေးကို ကြည့် ပါဦး..တဲ့ ။ မြေကြီးထဲကတူးတာ၊ ဒါဘာလဲမသိဘူး။ ဆေးတော့ ဖြစ်မှာပဲ လို့သူပြောတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ကျွ န်တော် က ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား..ကျွ န်တော့ ကိုပေး၊ ကျွ န်တော် နိုင်ငံခြားပို့ပြီး စမ်းသပ်လိုက် ပါမယ် ။ အဲဒီအတုံးကလေးရတော့ သိပ်ဝမ်းသာတယ် ။ ဘုရားသခင်ကို ဆက် ကပ်တယ် ။ ကိုယ် တော် .. ကိုယ် တော် ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့ မြေအောက် မှာရှိတဲ့ သယံဇာတ၊ ဒီဟာတွေကို အလဟသတော့ မဟုတ် ဘူး။ လူသားတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ အရာဖြစ်ရမယ် ။ ကျွ န်တော် တို့အားဖြင့် သူ့တပါးအကျိုးရှိဖို့ရန်အတွက် ကိုယ် တော် လမ်းဖွင့်ပေးတော် မူပါ..။ ကိုယ် တော် ..ကျွ န်တော် တို့ ငွေရရှိရေးအတွက် ပေးသနားတော် မူပါ..ဆုတောင်းတယ် ။ အဲဒီအတုံးကလေးကို တဖက် နိုင်ငံ ယူသွားပြီးတော့ စမ်းသပ်ရန်ပို့လိုက် တဲ့ အခါ ဟိုဖက် က ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ဒါက အရမ်းကောင်းတဲ့ အားဆေးဖြစ်ပါတယ် ။ ဘီပီအိုင်က ထုတ် တဲ့ ဆေးပြားကြတော့ ဘားပလက် Burplex လိုခေါ်တယ် ။ ဘားပလက် ခေါ်တဲ့ ဆေးတုံးကို ထုတ် နိုင်တဲ့ တကယ့် လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းပဲ။ အဲဒီပစ္စည်းအတော် များများရှိသလား..လို့ ကျွ န်တော် ကျေးရွာကလူတွေကို မေးလိုက် တဲ့ အခါ ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေက..အမေလေး.. များလွန်းလို့ ဆရာရယ် ၊ ..ယူနိုင်ရင် ကျွ န်တော် တို့ သွားတူးရင် တစ်နေ့ကို ပိသာ သုံး..လေးဆယ် ..ငါးဆယ် လောက် ရမယ် ။ ဆရာကြိုက် သလောက် ဈေးပဲပေးပါ၊ အဲဒါနဲ့ ကျွ န်တော် လည်းပြောလိုက် တယ် ။ နောက် နေ့ကျ တော့ အဲဒါကို ဘန်ကောက် ပို့မယ် လုပ်တော့ ဟိုဘက် က ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ဒီဟာကို အစိုပို့လို့မရဘူး၊ ခြောက် မှရမယ် ။ ဒီပစ္စည်းဟာ မှိုတက် တာ သိပ်မြန်တယ် ။ ဒီကနေ့ မခြောက် ရင် မနက် ဖန် မှုတက် သွားရော၊ ကျွ န်တောက စကားလွန်ပြီးပြီ၊ ရွာသားတွေက သွားတူးကြပြီး ကားကြီး၊ကားငယ် တွေနဲ့ ကျွ န်တော့် ဆီ လာပို့ကြတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ကျွ န်တော် လည်းကျွ န်တော့ ညီ ကိုတင်ရွှေကို နေပူထဲမှာ ဖြန့်လှမ်းခိုင်းလိုက် တယ် ။ နေ့လည် တောင်မရောက် သေးဘူး.. မှိုတွေ အများကြီးတက် လာတယ် ။ ကျွ န်တော့ ညီကို မှိုထွက် တဲ့ နေရာတွေ ခုတ် လိုက် ပါ..ပြောတော့ ကျွ န်တော့ ညီက လိုက် ခုတ် တာ .. ရှေ့မှာခုတ် ၊ နောက် မှာမှိုပြန်ထွက် လာတယ် ။ ဟာ.. ဘယ် လိုဖြစ်တာလဲ၊ ကိုယ် တော် .. ကိုယ် တော် ရဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ကျွ န်တော့် ကိုပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒါလေးကို ခြောက် အောင်၊ အခြောက် ခံစက် Dryer ရှိတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ တာချီလိတ် ဆိုတာ တောရွာပဲ၊ မီးတောင်မှ ကောင်းကောင်းမရတဲ့ နေရာ၊ (1989) အခြောက် ခံစက် မရှိဘူး..။ ဒီလောက် များတဲ့ ဥတွေကို ၂၄နာရီအတွင်း အခြောက် ခံစက် ဆောက် ဖို့ဆိုတာ အဆောက် အဦးအကြီးကြီဆောက် ရမယ် ။ လျှ ပ်စစ်လိုမယ် ။ ဂတ် စ် Gas လိုမယ် ..စသဖြင့်ပေါ့ ဗျာ။ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ လိုမယ် ။ ကျွ န်တော် ဆုတောင်းတယ် ။ မိန်းမကိုလည်းပြောတယ် ..မိန်းမ... ဒါတော့ ဘုရားသခင် ငါတို့ကို ဘယ် လောက် ထိ ဇွဲရှိသလဲ၊ သူ့ကို ဘယ် လောက် အထိ အားကိုးတယ် ဆိုတာ ငါတို့ကို စမ်းသပ်ကြည့် တာပဲ၊ စိတ် မပျ က် နဲ့လို့ ဆုတောင်းကြတယ် ။
10. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 10/24 ဆုတောင်း၍ဥာဏ် ပညာ တစ်ရက် ဆုတောင်းတယ် ။ ဘာမှ အကြံအစည် ပေါ်မလာဘူး၊ တစ်ညလုံး မိုးလင်းတဲ့ အထိ ကိုယ် တော့် ထံ ဆုတောင်းပါတယ် ။ ကိုယ် တော် ... ဒီပစ္စည်းတွေကို ကျွ န်တော် တို့ ၂၄နာရီနဲ့မှာ ခြောက် အောင် လုပ်နိုင်ဖို့ အခြောက် ခံစက် Dryer တစ်ခုလုပ်မယ် ။ ကိုယ် တော် .. ကျွ န်တော့် ကို Dryer Design ဒီဇိုင်းတစ်ခုပေးပါ။ ဘုရားသခင်ကို ဆက် ကပ်တယ် ။ (၇)ရက် တိတ် (၇)ရက် ၊ (၇)ည ဆုတောင်းပြီးတဲ့ အခါမှာ ဘုရားသခင်ဟာ အခြောက် ခံစက် ဒီဇိုင်း (Dryer Design) တစ်ခုကို ဖေါ်ပြပါတယ် ။ အဲဒီ ဒီဇိုင်းကို အုတ် နဲ့စီပြီး စမ်းသပ်လိုက် တဲ့ အခါ အောင်မြင်သွားတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ..အဲဒီနယ် မြေမှာ အဲဒီဆေးမြစ်တွေထွက် လာပြီး ကွှန်တော် တို့ဟာ (၂၄)နာရီအတွင်း ခြောက် အောင်ပြုလုပ်ပြီး တစ်ဖက် နိုင်ငံ..နိုင်ငံခြားအထိ တင်ပို့ရောင်းချပါတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ ဘုရားရှင်ဟာ အံ့ သြဘွယ် ကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ် ။ အကယ် ၍ မှုတက် တာနဲ့ ကျွ န်တော် တို့ စိတ် ပျ က် သွားပြီး ဆက် မလုပ်တော့ ဘူး ဆိုရင် ဘုရားသခင်ဘယ် လိုလဲ၊ ပေးတော့ ပေးပြီးတော့ ..အခုကျ မှ ဒီလိုဒုက္ခရောက် အောင် ပြုလုပ်တာပဲ ..ဆိုပြီး ဘုရားသခင်ကို အပြစ်တင်မှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ .. ဘုရားသခင်ကို ကျွ န်တော် အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ကို ဆက် လက် ပြီး ဆုတောင်းတဲ့ အခါမှာ ဘုရားသခင်ဟာ အသက် ရှင်တဲ့ ဘုရား၊ မနေ့၊ ယနေ့၊ နောင်ကာလ မပြောင်းလဲတဲ့ ဘုရား၊ ကျွ န်တော် တို့အနားမှာ အမြဲရှိတဲ့ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သက် သေခံတဲ့ အနေနဲ့ ကျွ န်တော် တို့ရဲ့ ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင် အဖြေပေးခဲ့တယ် ။ အဲဒါကြောင့် ကျွ န်တော် တို့ဟာ တစ်ပါတ် အတောအတွင်း ဒီဇိုင်းရရှိပြီး ဒီဆေးမြစ်ဥတွေကို ခြောက် အောင်ပြုလုပ်တယ် ။ ပြီးတဲ့ အခါ နိုင်ငံခြားကို တင်ပို့တယ် ။ အဲဒီအခါ မြောက် များစွာသော ငွေကြေးကို ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ ချမ်းသာလာခဲ့တယ် ။ ရွာသူရွာသားအားလုံး တံမြက် စီအချိန်မှာ တံမြက် စီး၊ ခုတ် သိမ်းပြီး ကျွ န်တော် တို့ကို ပေးတယ် ။ တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးရှိခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကြားမှာ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွ န်တော် တို့ကို စာမေးပွဲစစ်ပါတယ် ။ ပထမ စာမေးပွဲ၊ ဒုတိယစာမေးပွဲ၊ စစ်သလို ကျွ န်တော် တို့ကို အမြဲတမ်း အားပေးပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ကလည်းအရာရာမှာ ဘုရားသခင်ကိုသာ ဆက် ကပ်တယ် ။ ဘုရားသခင်ကိုသာ အားကိုးတယ် ။ ဒီနေ့ ခရစ်ယာန် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ဒုက္ခတစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ..ဆရာရယ် ... လုပ်ပါအုန်း... ဟိုဆရာရယ် ..လုပ်ပါအုန်း.. အသက် ရှင်တော် မူတဲ့ ဘုရား၊ ရှိရဲ့သားနဲ့ ဒီဘုရားသခင်ကို ဘာမှ မတိုင်ပင်ပဲ လူတွေထံ လိုက် ပြီး အခက် အခဲဖြေရှင်းဖို့ လိုက် ရှာတယ် ။ ကျွ န်တော် က ..ဒီလိုမလုပ်ရဘူး၊ ကျွ န်တော့် အသက် တာမှာတော့ ဘုရားကို ဆက် ကပ်ရင်း ဆုတောင်းရင် မတတ် နိုင်တဲ့ အရာ မရှိဘူးလို့ ကျွ န်တော် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည် တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ
11. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 11/24 ကျွ န်တော် တို့ဟာ အောင်မြင်စွာ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘုရားသခင် .. တစ်နှစ်မှာ (၁၂)လ ရှိတယ် ။ ရာသီအလိုက် ပေးပါ...လို့ ဆုတောင်းတယ် ။ တစ်ရာသီပေးပြီးရင် ရွာသူရွာသားတွေက တစ်ရာသီလုပ်ပြီး နောက် ထပ်ကျ န်တဲ့ ရာသီမှာ မလုပ်စားခင် ထမင်းငတ် မှာပဲ၊ ရာသီအလိုက် ပေးပါ ဆိုတော့ ..ဘုရားသခင်ဘယ် လောက် ကောင်းသလဲဆိုတော့ (၃)လတစ်ကြိမ်၊ (၃)လတစ်ကြိမ် ..တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ပေးပါတယ် ။ ကြိမ်သီးလေးတွေ အဲဒီဆေးမြစ်တူးတဲ့ ရာသီကုန်သွားတဲ့ အခါ ကျွ န်တော် တို့ ဘုရားသခင်ဆီကို ဆက် ကပ်ဆုတောင်းထားတဲ့ အတိုင်း ဘုရားသခင် ဘာထပ်ပေးသလဲဆိုတော့ ၊ ..အင်မတန်အံ့ သြစရာကောင်းတယ် ။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံဟာ ကျွ န်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြပါတယ် ။္ပ တစ်နေ့မှာ လာအိုနိုင်ငံ နယ် စပ်မှာရှိတဲ့ ရွာသားတွေက တာချီလိတ် ရောက် လာတဲအခါ အသီးလေးတွေ ပါလာပါတယ် ။ ရွာသူရွာသားတွေက အဲဒီအသီးလာပေးတော့ ကျွ န်တော် ယူထားလိုက် တယ် ။ နောက် တစ်နေ့ကြတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆိုင် ဘုရားကျောင်းမှာ ကျွ န်တော် ၀တ် ပြုစည်းဝေးတက် တဲ့ အခါ နိုင်ငံခြားတရားဟော ဆရာတွေ လာပြီး တရားဟောတာ တွေ့ရတယ် ။ ဟာ.. အဲဒီမှာ ဘုရားသခင် အသက် ရှင်တဲ့ အကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ ဘုရားကို ဆက် ကပ်ပြီး လုပ်ရင် အောင်မြင်တဲ့ အကြောင်း၊ သက် သေခံတာ ကြားရတော့ ကျွ န်တော် သိပ်အားရတယ် ။ သက် သေခံတရားဟောပြီး ၀တ် ပြုစည်းဝေးပြီးတဲ့ အခါ ကျွ န်တော့ ကို လာနှုတ် ဆက် တယ် ။ သူနဲ့ပါလာတဲ့ အဖွဲ့တွေကလည်းကျွ န်တော့် ကို လာနှုတ် ဆက် ကြတယ် ။ ကျွ န်တော် နဲ့ သူနဲ့ စကားပြောနေရင်း သူက ဒီမှာ ဘာတွေထွက် သလဲမေးတယ် ။ ကျွ န်တော် က သတ္တုရှိတယ် ။ ဘာရှိတယ် ။ ညာရှိတယ် ..စကားစပ်ရင်းနဲ့ ဒီပစ္စည်းလဲရှိတယ် လို့ သူ့ကို ကျွ န်တော် ပြလိုက် တဲ့ အခါ ..သူက ...ဟာ.. ဒီပစ္စည်းကို ငါတို့က လာအိုနိုင်ငံမှာ ရှာနေတာ၊ ဗီယက် နမ်နိုင်ငံမှာလည်းရှာနေတာ ..ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာရှိလား...တဲ့ ။ ရှိတယ် .. ရွာသူရွာသားတွေပြောတာတော့ အများကြီးပဲ၊ ကောင်းပါပြီ၊ ဒါဆိုရင် ..ဟောင်ကောင်းက ကျွ န်တော် တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီက လူကို ခင်ဗျားဆီ လွှတ် လိုက် ပါမယ် ..လို့ ပြောတယ် ။ ဟောင်ကောင်က သူ့ရဲ့ ကုမ္ပဏီကလူ ရောက် လာတယ် ။ ရောက် လာတဲ့ အခါ ကျွ န်တော် နဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း ခဲ့တယ် ။ ခင်ဗျားရွာမှာ သွားမေးကြည့် ပါ။ အဲဒီပစ္စည်းကို ရွာသူ၊ရွာသားတွေကို ဘယ် လိုရောင်းမလဲ မေးခိုင်းတယ် ။ ကျွ န်တော် က တစ်ရွာပြီးတစ်ရွာ၊ ခရစ်ယာန်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေရော၊ ပြင်ပရွာတွေရော သွားပြီးတော့ အဲဒီရွာမှာရှိတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို အကုန်ခေါ်မေးလိုက် တဲ့ အခါ ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ သိပ်မာတယ် ဆိုတဲ့ ပစ္စည်း၊ ဒီပစ္စည်းတော့ ကျွ န်တော် တို့လိုချင်ပါတယ် ။ ဘယ် လောက် ဈေးနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ရောင်းမလဲဆိုတော့ ..ရွာသူရွာသားတွေက ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ... အောင်မလေး..ဆရာရယ် ၊ ဒါ သိပ်မာလွန်းလို့ ၀က် တောင်မှ မကိုက် နိုင်ဘူး။ ၀က် တောင်မစားဖူး။ ဆရာတို့ ယူရင် ကျွ န်တော် တို့ အလကားကြုံးပေးပါမယ် ။ ...အလကားတော့ ဘယ် ဖြစ်မလဲ၊ ရေရှည် ယူမှာမို့လို့ ဒီရာသီမှာတော့ ဒိကိုယူမှာဆိုတော့ ရွာသူကြီးနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေဟာ အားလုံးတိုင်ပင်ပြီး တပုံး (၁၀ိ/ တစ်ဆယ် ကျ ပ်) တဲ့ ၊ သူတို့က ကီလိုချိန်မရှိဘူး၊ ပိသာချိန်မျိုးမပေးဘူး၊ ရေနံဆီ သံပုန်းတစ်ပုံ တစ်ဆယ် ကျ ပ် ပြောတာ။ ဟာ.. ဒီလိုဆိုရင် သိပ်နည်းတယ် ။ ခင်ဗျားတို့မကိုက် ဘူးထင်တယ် ..လို့ ကျွ န်တော် ပြောတော့ ..သူတို့က ..ဟာ.. ကိုက် တယ် ။ တစ်နေ့ကို တစ်ယောက် (၁၀)ပုံးလောက် တော့ အသာလေး ကြုံးလို့ရတယ် ။ ၁၀၀ိ/ ရတယ် တဲ့ ။ (ထိုခေတ် က တစ်ဒေါ်လာ­တစ်ရာကျ ပ်ခန့် ဈေးပေါက် သည် )။ ဟာ.. ဒီလိုတော့ မဖြစ်ဘူး။ ကျွ န်တော် ပြန်ပြီး တိုင်ပင်ကြည့် တယ် ။
12. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 12/24 ငိုင်ပင်လိုက် တဲ့ အခါ ဒီဘက် ကပြောတယ် ။ တောင်းတဲ့ ဈေးထက် ၃ဆလောက် ပေးလိုက် ပါ..တဲ့ ။ ကျွ န်တော် က ကောင်းပြီ၊ ခင်ဗျားတို့က (၁၀ိ/) တောင်းတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့က (၃၀ိ/) ပေးမယ် ဗျာ..လို့ ရောင်းတဲ့ လူက (၁၀ိ/) ထဲယူတယ် ။ ၀ယ် တဲ့ လူက (၃၀ိ/) ပေးတယ် ။ အဲဒါနဲ့ (၃၀ိ/) ပေးတယ် ဆိုတော့ အားလုံးသဘောတူညီကြတယ် ။ အားလုံး အဲဒီပစ္စည်းကို တောထဲမှာ သွားပြီး ကြုံးလာကြတယ် ။ ကြိမ်ရဲ့အသီးဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒါတွေကို နိုင်ငံခြားပြန်တင်ပို့တဲ့ အခါ သူတို့တောင်းတဲ့ ဈေးထက် ကွှန်တော် တို့က (၁၀) ပိုရပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားကနေ ခင်ဗျားတို့ ပစ္စည်းကို တန်ရာတန်ကြေးကတော့ ဒီလောက် ပေးပါမယ် ဆိုပြီးတော့ ပေးပါတယ် ။ ဘုရားသခင်က ဘယ် လောက် အံ့ သြစရာကောင်းသလဲ ဆိုတော့ အဲဒီနယ် မြေ၊ အဲဒီဒေသမှာ ဘာမှ စီးပွားရေးမရှိသော် ငြားလည်းသူဖန်ဆင်းထားတော် မူတဲ့ သဘာဝ သယံဇာတများအားဖြင့် ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ကျွ န်တော် တို့ဟာ ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေး၊ မြက် လာတဲ့ ငွေကြေးများကို အနီးအနားတ၀ိုက် မှာရှိတဲ့ ယုံကြည် သူ၊ မယုံကြည် သူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ သူများကို ကူညီမစတယ် ။ ကျွ န်တော့် အမျိုးသမီးဆိုရင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ သူကို ကူညီမစဖို့ဆိုရင် လုံးဝမတွန့်တိုဘူး။ ကွှန်တော် က (၁၀၀) ပေးပါဆိုရင် သူက တစ်ထောင်ပေးပါ။ အဲဒီလိုမျိုး အားပေးတယ် ။ အဲဒီလိုမျိုး ကျွ န်တော် တို့က လိုက် ဖက် ညီကြတဲ့ အခါကြတော့ ရွာသွားရင်၊ အင်္ကျီဝတ် သွားရင် ပြန်လာရင် မရှိတော့ ဘူး၊ ဆင်းရဲတဲ့ အဖိုးအဖွားနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ ကျွ န်တော် မကြည့် ရက် နိုင်ဘူး။ အင်္ကျီချွတ် ပေးခဲ့တယ် ။ ပါသွားတဲ့ ပိုက် ဆံပေးခဲ့ပါတယ် ။ သမ္မာကျ မ်းစာထဲမှာ ဖေါ်ပြတဲ့ အတိုင်း ဆင်းရဲသားကို စွန့်ကြဲတဲ့ သူဟာ ချမ်းသာတယ် ။ ဟုတ် ပါတယ် ။ အဲဒီ ဂတိတော် အတိုင်း ကျွ န်တော် တို့ တကယ် ခံစားရပါတယ် ။ ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည် ပြီးတော့ အမှုတော် မြတ် မှာ ပါဝင်သွားတဲ့ အခါ ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးတယ် ဆိုတာ ကျွ န်တော် တွေ့ရတယ် ။ ဒီနေ့ မြောက် များစွာသော သူတွေ ကျွ န်တော့ ဆီလာပြီး အလှုငွေလာတောင်းကြတယ် ။ အလှုငွေလာပေးပါ။ ခင်ဗျားတို့ စီမံကိန်းက ဘီလီယံလောက် သန်းပေါင်း ဘယ် နှစ်ထောင်နဲ့ လုပ်နေတာ .. အလှုငွေလာပေးပါ။ ကျွ န်တော် ပြောတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ ဆုတောင်းပါ။ ကျွ န်တော် ပိုင်တဲ့ ငွေမဟုတ် ဘူး၊ ကျွ န်တော် ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘဏ္ဍာထိန်းပဲ၊ ဒီနေ့ ဘုရားသခင် ကျွ န်တော့ ကို အပ်နှံထားတဲ့ ငွေပဲ။ ဘုရားဆီ တောင်းပါ။ ဘုရားဖေါ်ပြလို့ တို့ထိပေးရင် ပေးပါမယ် ။ အားလုံးပေးမှာပဲ။ အခုန ပြောတဲ့ အကြောင်း ပြန်ဆက် ရရင် အဲဒီပစ္စည်းကို ဟောင်ကောင်တင်ပို့လိုက် တယ် ။ သူတို့လည်းသဘောကျ ကြတယ် ။
13. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 13/24 ကနေဒါအထိ တင်ပို့ရတယ် ။ ဒီနေ့လဲ ဆက် လက် ပြီး သူတို့ထံ တင်ပို့နေရပါတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ ဆက် လုပ်ရင်း (၂)နှစ် (၃)နှစ် ဖေါ်စားပြီး၊ ပြည် သူလူထုက အကုန်လုံးသိတော့ အကုန်လုံး ဖေါ်စားတော့ ကျွ န်တော် မဖေါ်တော့ ပါဘူး။ အခု တံမြက် စီးပြီးတော့ သုံးနှစ်လောက် ကြာတော့ ကျွှ န်တော် မဖေါ်တော့ ဘူး။ သူများ အားလုံး လုပ်ကြပြီဆိုတော့ ကျွ န်တော် မလုပ်တော့ ဘူး။ အသီးကလေးနောက် တမျိုး နောက် ထပ် လုပ်ငန်းလိုတယ် ..လို့ ဘုရားသခင်ကို ဖေါ်ပြတယ် ။ ဘုရားထံမှာ ဆုတောင်းတယ် ။ ကိုယ် တော် .. နောက် ထပ် တစ်မျိုးတော့ ထပ်ပေးပါဦး၊ ကိုယ် တော် ကို ဆုတောင်းတယ် ။ ဆုတောင်းတဲ့ အခါ ဘုရားသခင်က ဘယ် လောက် အံ့ သြစရာ ကောင်းသလဲဆိုတော့ "အခါ" လူမျိုးတွေဟာ တောရွာမှာ နေတယ် ။ တနေ့သောအခါမှာ လူမျိုးအဖွားကြီး ၂ယောက် ၊ ၃ယောက် ဟာ အသီးကလေးတစ်မျိုးပါလာပြီး ဈေးမှာ လိုက် ရောင်းတယ် ။ စားလို့လည်းရတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အရသာက စပ်ရှိန်း၊ စပ်ရှိန်းဖြစ်တယ် ။ အဲဒါနဲ့ ကျွ န်တော် ကြည့် လိုက် တဲ့ အခါ တရုပ်ဘယဆေးမှာပါတဲ့ တရုပ်နိုင်ငံမှာ အင်မတန်နာမည် ကြီးတဲ့ တန်ဘိုးကြီးတဲ့ ဆေးဆိုတာ ကျွ န်တော် သိလိုက် တယ် ။ သူတို့ကို မေးကြည့် တယ် ။ ဒီပစ္စည်းတွေက ဘယ် ကရသလဲ၊ ရွာအနီးအနားမှာ သူဖာသာ သဘာဝနဲ့ တအားပေါက် တာဘဲ..တဲ့ ။ အဲဒါနဲ့ ကျွ န်တော် ရွာကိုသွားပြီးတော့ ရွာသားတွေနဲ့ ဘုရားရှိခိုးတယ် ။ ယေရှုခရစ်တော် အကြောင်းကို သက် သေခံတယ် ။ သူတို့နဲ့ မိတ် သဟာရဖွဲ့တယ် ။ သူတို့ကိုလည်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာရော အားလုံး လမ်းပြပေးပါတယ် ။ ခုန ပြောတဲ့ အသီးကိုလည်းကျွ န်တော် ဖော် ထုတ် ပြီးတော့ အခြောက် ပြုလုပ်တယ် ။ တရုပ်နိုင်ငံအထိ တင်ပို့ရောင်းချတယ် ။ ဒီကနေ့ အထိ၊ အင်မတန်နာမည် ကြီးတဲ့ တရုပ်ဘယဆေးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဆေးဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ရတာ ပိုက် ဆံမရဘူးလား..ဆိုတော့ ရတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွ န်တော် ဘုရားသခင်ကို ပြောတယ် ။ ကိုယ် တော် ... ဒီလောက် နဲ့မဖြစ်သေးဘူး။ ကိုယ် တော် ရှင်ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတော် ၊ တန်ခိုးတော် ၊ နာမတော် သည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွ န်တော် တို့ကို မြင်တာနဲ့တပြိုင်ထဲ မယုံကြည် သောသူများ မြင်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည် လာအောင်၊ ယုံကြည် သူများမြင်ခြင်းအားဖြင့် ခွန်အားရလာအောင် ကျွ န်တော် လှူချင်ပါတယ် ....လို့ ကိုယ် တော် ၊ အဲဒီလောက် အထိ ကျွ န်တော် တို့ကို ချီးမြှောက် ပါ။ ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေးမှန်သမျှ လည်းကိုယ် တော် ရှင်ဘုရားရဲ့ အမှုတော် မြတ် မှာ ပါဝင်မဲ့ငွေကြေးပဲလို့ .. လင်မယား(၂)ယောက် စလုံး ဆက် ကပ်ဆုတောင်းပါတယ် ။ အဲဒီလို ဆုတောင်းရင်းနဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဖော် ထုတ် တယ် ။ အဲဒီဒေသမှာလည်းတိုးတက် လာတယ် ။ ဖွံ့ဖြိုးလာတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့လည်းငွေကြေး မြောက် များစွာရလာပါတယ် ။
14. 2/19/2015 Myanmar Godly Attitude ­ To Reform Country 2015 http://murann.com/stories/ukyawwin.testimony.1997.htm 14/24 ဘုရားကျောင်းဆောက် လုပ် ရလာတဲ့ ငွေကြေးထဲမှာ မိမိ မိသားစူရဲ့ စားဝတ် နေရေး နေထိုင်ရေးအတွက် လောက် ပဲ ယူပြီး၊ ကျ န်တဲ့ ငွေကို အဲဒီဒေသမှာပဲ ပြန်လည် ပါဝင်ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် ဆိုရင် အဲဒီအချိန်က တာချီလိတ် မှာ ကျွှ န်တော့် ရဲ့ အိမ်မဆောက် သေးပါဘူး။ တာချီလိတ် ဘုရားကျောင်း လိုတယ် လို့ ကျွ န်တော် မြင်တဲ့ အခါ ကျွ န်တော် တို့ သစ်လုပ်ငန်းလုပ်နေရင်းနဲ့ ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေး မှန်သမျှ ကို ပုံအောပြီးတော့ မှ တာချီလိတ် နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်း ဆောက် လိုက် တယ် ။ ကျွ န်တော့် အိမ် ကျွ န်တော် မဆောက် သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွ န်တော် အရင်ဆုံး ဘုရားကျောင်းဆောက် လိုက် ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ် ကပတ် တော် တရားမှာ ပါတယ် ။ ကျွ န်တော် တို့ ဒီနေ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နောက် လိုက် တွေက ဘာဖြစ်လို့ ဆင်းရဲလဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အိမ်တော် ဟာ စုတ် ပြက် နေတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ဒီလူတွေကို ဘုရားသခင်က ဆင်းရဲခိုင်းတာ၊ ဒါကြောင့် ဒီလူတွေကို ဘုရားသခင်က ဒုက္ခရောက် ခိုင်းတာ ..တဲ့ ။ ဟဂ္ဂဲ ကျ မ်းမှာ ဖတ် ကြည့် ပါ။ (ဟဂ္ဂဲ ၁း၆ သင်တို့သည် များစွာသော မျိုးစေ့ ကိုကြဲသော် လည်းအသီးအနှံနည်းပါးရ၏။ စားရသော် လည်းဝစွာမစားရကြ။ သောက် ရသော် လည်းဝစွာမသောက် ရကြ။ အဝတ် ကို ဝတ် ရသော် လည်းနွေးစွာမဝတ် ရကြ။ အလုပ်လုပ်၍ အခကိုခံရသော် လည်းမလုံသောအိတ် ထဲမှာ သိုထားရ၏။ You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them inapurse with holes in it.” မုရန်) ဖတ် ကြည့် ပါ။ ကျွ န်တော် အဲဒီကျ မ်းပိုဒ်ကိုကို ဖတ် လိုက် တဲ့ အခါ အင်မတန်ခွန်အားရတယ် ။ ဟာ.. ဒါဆိုရင်မဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့ တာချီလိတ် နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်း၊ ဘုရားရဲ့အိမ်တော် ဟာ ပျိုပျ က် နေတယ် ။ အက် နေပြီး၊ ကွဲနေပြီး၊ မိုးရွာရင် ရေတွေဝင်ပြီး ပိုက် ဆံရှိတဲ့ လူတွေက အိမ်မှာ ပန်ကာနဲ့ ဇိမ်နဲ့ အားလုံးရှိကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွ န်တော် အဲဒီကျ မ်းပိုဒ်ကို ဖတ် မိတဲ့ အခါ ကျွ န်တော် က ကောင်းပြီ၊ တာချီလိတ် နှစ်ခြင်းဘုရားကျောင်းကို ကျွ န်တော် တို့ တာဝန်ယူမယ် ဆိုပြီး ရှိရှိသမျှ ငွေနဲ့ အဲဒီဘုရားကျောင်းကို ဆောက် တယ် ။ ဆောက် လိုက် တဲ့ အခါ ဘုရားရလည်းအံ့ သြစရာထပ်ပြီး လမ်းဖွင့်ပေးတယ် ။ မစ္စတာချွန်း ကျွ န်တော် ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မစ္စတာချွန်းနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ မစ္စတာချွန်းက သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်ကူညီ လုပ်ကိုင်ဖို့ လူ (၄ယောက် ) လာခေါ်ပါတယ် ။ (၄)ယောက် လာခေါ်တဲ့ အခါ (၄)ယောက် စလုံး လူငယ် တွေပါပဲ။ အားလုံး သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ
Dr.pemyat.win. Spititual Journey Book 407pages
Right Attitude For Meditation
Rogma international bible course lesson 1 36.with.cover